Dhismaha Bangiga Dhexe iyo Miyuusiyeyaasha Dabiiciga ah
Murtida Bangiga Dhexe
Bangiga bangiga la yimid dhaleeceyn. Markaa, ganacsato badan iyo xirfadlayaal ganacsigu ma fahmin. Qaar ayaa ku dhalleeceeya iyaga oo sheegaya inay lacagtooda ku xafidi karaan akoon bangi meel ka baxsan. Sawirada doomaha dheereeya, doonyaha qaaliga ah, boqorada dawooyinka, iyo suugaanta cad ayaa isla markiiba maskaxda ku soo dhaca. Intaa waxaa sii dheer, faafinta filimada xun ee Hollywood, showyada telefishanka, iyo sawir xumada saxaafada wax kama badalin aragtidan. Iyagu kama dheerayn karaan runta.
Sida Dadku Runtii U Adeegsadaan Bankiyo Dibadeed
Xaqiiqdu waa tan. Xarumaha maaliyadeed ee ka baxsan xeebaha (OFC) ama bangiyo, oo sidoo kale loo yaqaan meelaha canshuuraha, ayaa jira inta badan sababaha ugu waaweyn. Waxay kaa caawin karaan bixinta hantida, koritaanka hantida, iyo dhimista canshuurta - waxay kuxirantahay awoodaada. Waxaan ognahay hay'adaha noocaas ah inay u adeegaan shaqsiyaadka shisheeye iyo shirkadaha, waaweyn iyo yar yar, adduunka.
Meelaha akoonnada bangi ee dibedda laga helo iyo xarumo maaliyadeed waxay kuu soo bandhigi karaan xalal adduunyo oo dhab ah arrimaha badan ee dadka maanta wajahay. Waxay ka caawin kartaa kuwa raadinaya ilaalinta hantida dacwadaha socda. Sidoo kale waa qaab loo yareeyo caqabadaha ka yimaada dowlad aan xasilloonayn.
Si loo hubiyo, waxaa ugu wanaagsan in la isku daro koonto bangi oo dibedda ah iyo aaminaad ilaalin hanti. Isku-darkaan, iskudhaafka hantida wuxuu ka imaan karaa khatarta caadiga ah. Dhibaatooyinka noocan ah waxaa ka mid ah furriinka, xaaladaha suuqa oo liita, ama dacwadda. Khatarahaasi waa kuwa ku badan dunida Galbeedka.
Hantidhowrka Baanka Dhexe: Dhacdooyinka Lacagta, iyo Waxyaabaha kale ee Dambiyada
Bangiyada adduunka oo dhan waxay leeyihiin hal hadaf oo muhiim ah markii la furayo xisaabaad loogu talagalay dadka shisheeyaha ah. Taasi waa, in la ilaaliyo kuwa wanaagsan oo laga fogaado kuwa xun. Bangigu wuxuu waayi karaa laysankiisa haddii uu u ekaado dhanka kale marka ay ka shakiyaan dhaqdhaqaaq laga shakiyo. Waxay sidoo kale lumin kartaa awoodii ay ku lahayd inay ku soo dirto lacagaha doollarka Mareykanka ama Euros, asal ahaan ka joojiso meheradda. Marka, ku kalsoonow, markii aad koonto furaynayso, bangigu kuu oggolaan maayo inaad ka dhigato bixinta dukumiintiyadaada aqoonsiga. Waxay rabaan inay arkaan ilaha lacagta ah ee dukumiintiga lacagaha laga helo. Intaas waxaa sii dheer waxay rabaan caddeyn ah in lacagaha ay ka yimaadeen ilo sharci ah. Qiimaha helitaanka iyo dayactirka laysanka bangiga waa mid aad u badan. Sidaa darteed, bangiyadu kuu oggolaan maayaan inaad ka dhigto gaagaaban. Markay tahay helitaanka dadaalka loo baahan yahay awgeed bangigu wuxuu hubin doonaa dhammaan sanaadiiqda kahor furitaanka akoonkaaga.
Waxay noqon laheyd khalad khalad ah in lagu sheego inaysan lacag sharci darro ah marin u helin akoonada bangi. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan arki doonno, taasi runtii wax badan ma oranayso. Xaqiiqda, bal aan eegno xukumaadahaas kuwa dhexdhexaadiyaha ugu yaraan u tuhunsan inuu dambiile yahay. Degmooyinka loogu yeero amni ee badbaadada waxay leeyihiin howlo bangiyeed sharci darro ah oo ka badan waxa loogu yeero "meelaha canshuurta laga qaado". Xeerarkii "anshaxa" weynaa waxay noqdeen kuwa ugu waaweyn ee lagu dhaqmo lacagaha iyo xarumaha maalgelinta dambiyada ee adduunka. Oo Mareykanku waa kan ugu weyn. Mareykanku wuxuu gudbiyaa ku dhowaad kalabar dhammaan lacagaha dunida laga soo daabacay oo lagu soo rogay gobollada ay ka midka yihiin 50. Qeybtan waxaa loo tarjumey qiyaasta muxaafidka ee $ 300 bilyan US.
Dabcan, Mareykanku kaliya maahan canshuurta sare, ama xukunka "weyn" ee hoyga u ah hawshan. Wadamo kale sida Boqortooyada Midowday (UK) iyo Jarmalka ayaa qayb ka ah kala soociddan layaabka leh. Dadka Mareykanka waa canshuur dakhliga soo gala adduunka. Marka, dhaqaajinta lacagaha ka baxsan badeecadaha saxda ah ee ku habboon aaladaha sharciga ee badan waxay bixiyaan faa'iidooyinka ilaalinta hantida. Si kastaba ha noqotee, maahan wax waxtar u leh dhimista canshuurta. Ahaanshaha furfurnaanta canshuurta ayaa ah xaqiiqda cusub, canshuurta kacsiga Isticmaalidda dhismayaasha dibedda laguma talin ama xaqiiq ahaan wax ku ool ah.
Fikradda beenta ah ayaa ah in xukunnada canshuureed ee maareynta / xaddiga xeebaha ay yihiin meelaha ugu habboon ee lagu maalgeliyo dambiilaha. Xaqiiqdu, si kastaba ha noqotee, ayaa ah in shuruucda canshuuraha sare ay ku badan yihiin lacagahaas. Meelaha cashuuraha hooseeya waxay ka dhigan yihiin boqolkiiba inta aad uga yar guud ahaan.
Xaqiiqda noocan ah, dabcan, waa dhif iyo naadir in abidkeed laga soo sheego wararka TV-ga iyo warbaahinta daabacan. Xukummada ku lugta leh si cad ayey uga xishoodaan fikradaha qaldan ee ay ka qabaan.
Marka, sida aan arki karno, waxaa jira khuraafaadyo badan oo ku xeeran baananka xeebaha. Markii aan dhex galno, si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa in bangiyada dibedda ay si aad ah u nidaamsan yihiin. Bangiyada ayaa waayi kara laysantooda ama ku ganaaxi kara ganaax adag markay qaataan macaamiishooda aan sharciyeysnayn. Qawaaniintu waxay si joogto ah u baaraan bangiyada diiwaanadooda aqoon-ka-macaamilka ah. Haddii baaraha baanka ka shakisan yahay inuu qof u isticmaalo koontoonkiisa caalamiga ah ujeedooyin aan sharci ahayn, ma heli doontid xisaab. Haddii sidan loo isticmaalo ka dib furitaanka koontada, goor dhow waa laga cayrin doonaa banki.
Bangiga hayaa ruqsaddiisa ayaa kuxiran iyaga oo raacaya xeerarka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Intaas waxaa sii dheer, waa inay u hoggaansamaan heerarka adag ee dhaqaalaha. Sidaa darteed, bangiyada adduunka ayaa aad ugu dadaala inay sharciga raacaan. Waxay ku dadaalaan sidii ay dadka wanaagsan u ilaalin lahaayeen isla markaana ay uga bixi lahaayeen dadka xun. Dhaqan galkooda dhaqaale waxaay kuxirantahay.
<Illaa cutubka 3
Ilaa cutubka 5>